Iskaashi Istiraatiijiyadeed oo lala yeesho ScienceOpen - AfricArXiv
Published by Jo Havemann on 27th Janaayo 2020 27th Janaayo 2020
ScienceOpen iyo AfricArXiv waxay iska kaashanayaan inay siiyaan cilmi baarayaal Afrikaan ah muuqaal xawaare ku socda, isku xirnaan iyo fursado iskaashi.
Qalabka cilmi baarista iyo daabacaadda ScienceOpen wuxuu bixiyaa adeegyo iyo muuqaalo ku habboon daabacayaasha, machadyada iyo baarayaasha si isku mid ah, oo ay ku jiraan martigelinta nuxurka, qaab dhismeedka, iyo astaamaha daahfurka.
Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan iskaashi la samayno AfricanArXiv si aan u siino ikhtiyaar dheeraad ah cilmi-baarayaal Afrikaan ah oo aan gacan ka geysanno muujinta deeqda waxbarasho ee aadka u wanaagsan ee laga soo saaray shabakaddeena sahaminta.
Stephanie Dawson, Madaxa Shirkadda ScienceOpen
Markaad tahay cilmi baadhe, waxaad ku dhisi kartaa astaantaada cilmi baarista 'furfuran' 'ScienceOpen' sida soo socota:
Raadi oo soo hel cilmi baaris laxiriirta in kabadan 60 milyan oo qoraalo ah marinka furashada iyo maqaalo qorista
La wadaag khibradaada oo ay ku helaan dhibco adiga oo si fagaare ah dib u eegis ku sameeya maqaal kasta
Daabac boodhkaaga or daabacaadda oo ku martiqaad cilmi-baareyaasha laxiriira inay dib u eegaan shaqadaada. Raadso adeegsiga iyo cabbir kale oo loogu talagalay daabacaadaada.
Abuur uruurin Mawduuc si loo hormariyo goobtaada cilmi baarista
Ururinta ScienceOpen waxay siisaa meel bulshada loogu talagalay soo-saarista, qaybinta iyo qiimeynta macluumaadka aqoonta.
AfricanArXiv waxay xireysaa aruurinta ScienceOpen AfricanArXiv Diyaargarow kaas oo soo aruurinaya waxyaabaha ka kooban AfrikaArXiv oo ka yimid meerayaashayada kale ee martigelinta: the Qaab-dhismeedka Sayniska ee Furan iyo Zenodo. Laga bilaabo maanta, waxaad si toos ah ugu ridi kartaa gacantaada qoraal gacmeedka qoraalka diyaarinta ah mashiinka ScienceOpen adigoo adeegsanaya Soo gudbi qoraal gacmeed badhanka. Buug-gacmeedkaagu wuxuu mari doonaa hubin tayo leh mid ka mid ah xubnaha kooxdeena markii la oggolaadona waxaa lagu dhajin doonaa khadka tooska ah a Crossref DOI iyo CC BY 4.0 ruqsadda siidaynta Mar haddii qoraalkaaga uu ku qornaa khadka tooska ah ee 'ScienceOpen' waxaad ku casuumi kartaa cilmi-baarayaal kale oo jooga goobtaada si ay ugu qoraan Warbixinta Dib-u-eegista Fudud ee Fudud.
Muuqaalka dheeriga ah ee ay soo bandhigtay ScienceOpen ee dib u eegista heerka asaaga ah ee ku saabsan diyaarinta waxay ku darsataa faa iidooyin badan cilmi baarayaasha Africa iyo guud ahaan labadaba. Markaad la shaqeyso qorayaasha buugaagta aruurinta ee AfricanArXiv, bulshada ScienceOpen waxay markaa si toos ah ula shaqeyn kartaa, bixin kartaa jawaab celin iyo soojeedin ku saabsan wanaajinta qoraalada. Tani kaliya ma hubin doonto dukumiintiyada natiijooyinka baarista tayada sare ah laakiin waxay sidoo kale kobcin doontaa iskaashiga dhammaan xuduudaha.
Osman Aldirdiri of AfricanArXiv
Eeg oo sahaminta AfricanArXiv Diyaargarow ururinta on ScienceOpen.
Baro sida loogu gudbiyo AfricanArXiv iyada oo loo sii marayo ScienceOpen.
Ku saabsan ScienceOpen
ScienceOpen waa madal daahfuran oo cilmi baaris cilmiyaysan ku saabsan dhammaan duruusta. Laga soo bilaabo smart, raadinta dhaqamada kala duwan ilaa aruurinta cilmi baarista, dib u eegista furfuran, soo koobitaanka waxyaabo badan iyo waxyaabo dheeri ah, waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ikhtiyaar ah oo si wax ku ool ah loo helo loona wadaago natiijooyinka baaritaanka. | Bog: sayniska - Twitter: @Saynis_Open
AfrikArxiv waa kayd bulsho oo bulshada u horseedaysa isgaarsiinta cilmi baarista ee Afrika. Waxaan bixinaa madal aan faa'ido doon ahayn oo aan ku soo daabacno waraaqaha shaqada, waraaqaha diyaarinta, qoraallada la aqbali karo (waraaqaha boostada ka dib), soo-bandhigyo, barnaamijyo la dejinayo mid kasta oo ka mid ah adeegyadayada iskaashigeenna ah. AfricArxiv waxaa ka go'an inay furto cilmi baaris iyo iskaashi dhexmara saynisyahano Afrikaan ah, si loo kordhiyo aragtida wax soo saarka cilmi baarista Afrika iyo in la kobciyo wada shaqeynta ka dhaxeysa caalamka. | Bog: africarxiv.org - Twitter: @AfricArXiv
Tags: iskaashiDib-u-eegidda AraggaScienceOpen
ScienceOpen iyo Jaamacadda South Africa Press waxay bilaabeen server-ka hore-u-diyaarinta ee UnisaRxiv - AfricArXiv	· 25-ka Febraayo 2021 markay tahay 12:44 pm
[…] Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan iskaashiga aan la leenahay AfricArXiv: https://info.africarxiv.org/scienceopen-partnership/ [...]